Ny KDE haingana sy kanto amin'ny openSUSE 13.2 Harlequin - SMB Networks | Avy amin'ny Linux
phico | | Tambajotra / seriver
Ny tena tanjon'ity lahatsoratra ity dia ny hampisehoana ny fomba hahatratrarantsika ny Desktop - Desktop fototra miaraka amina farafahakeliny farafahakeliny, satria efa manana DNS - DHCP amin'ny tambajotra, ary tsy mila manamboatra tanana ny tambajotram-pifandraisana isika.
Nanapa-kevitra ny hanao ny birao amin'ny kinova izahay openSUSE 13.2 Harlequin, ary aza miandry intsony intsony ny fanatanterahana ireo tahiry fametrahana DVD sy kinova 42.2 Leap. Araka ny nolazain'ny namako sy mpiara-miasa amiko tamiko, Ing. Eduardo Noel Núñez, ny fizotry ny fametrahana dia tsy miovaova be eo amin'ireo kinova na eo aza ny fitsambikinana isa izay mamaritra azy ireo.
1 Fametrahana tsikelikely amin'ny alàlan'ny sary
1.1 Fanohanana fametrahana
1.2 Fametrahana, fanambaràna ireo tahiry ary fanavaozana ny rafitra
2 Fikirana voalohany hafa
Fametrahana tsikelikely amin'ny alàlan'ny sary
Nahazo efijery 51 totalinay izahay mba hanehoana ny dingana tsirairay araka izay azo atao. Isaky ny efijery fametrahana, openSUSE Manamora ny asantsika amin'ny fisian'ny bokotra fanampiana - Vonjeo mazàna no hita eo ankavia havia.
Tsy hanome famaritana ny pikantsary tsirairay izahay satria heverina ho tsy misy dikany izany. Araka ny voalaza, «Ny sary dia mitaky teny arivo".
Hahita sary maro mitovy amin'ny sary nalaina tao amin'ny Teo aloha lahatsoratra, fa mendrika ny aseho azy ireo manontolo amin'ity iray ity, ka tsy ilaina ny mandeha amin'ny pejy web iray mankany amin'ny iray hafa. Izany no hanamorana ny famakian-teny.
Amin'ny maha mpanelanelana amin'ny fametrahana azy dia mampiasa ny sary DVD izahay openSUSE-13.2-DVD-x86_64.iso. Raha tsy manana mpilalao DVD ilay fitaovana, na raha mora kokoa amintsika ny mampiasa fitadidiana - pen drive, azontsika atao izany araka ny voalaza ao amin'ilay lahatsoratra Memory amin'ny autostart hametrahana Debian, CentOS, na openSUSE. Aorian'ny fametrahana ny rafitra fandidiana, ny programa dia azo apetraka ary ampiasaina hanomanana fahatsiarovana Mpanonta sary avy amin'i SUSE Studio.
na izany aza soso-kevitra izahay andrana amin'ny milina virtoaly aloha.
Fametrahana, fanambaràna ireo tahiry ary fanavaozana ny rafitra
Manoro hevitra izahay ho an'ny milina virtoaly openuse-desktop.fromlinux.fan RAM eo amin'ny 768 megabytes ary kapila mafy 20 - 80 GiB, arakaraka ny fomba hampiasana azy ary raha tianao ny manandrana milalao rakitra multimedia ao aminy.
Ekenay amin'ny alàlan'ny default ny Tolo-kevitra fizarazarana atolotry ny programa fametrahana, ho mariky ny fahatokisana ny zavatra niainan'ny OpenSUSE amin'ireo faritra ireo.
Raha tsy hizaha toetra voalohany amin'ny milina virtoaly ianao ary manapa-kevitra ny hanao izany mivantana amin'ny Desktop anao, Fikarakarana lehibe tsy ho very ny tahiry efa misy ao amin'ny kapila anao. Fikarakarana lehibe miaraka amin'ny System System - File System voafantina. Fikarakarana lehibe tsy manova ny File System an'ny fizarazaran-kevitra miaraka amin'ny angona, ary tsy mamolavola azy.
Na dia asehontsika aza ny solosaim-birao azo safidiana, dia safidintsika ihany ny KDE. Mino izahay fa mampiasa birao hafa ankoatry ny KDE ao a openSUSE Desktop, tsy fanajana rehetra izany Ekipa OpenSUSE. 😉 Na izany aza, aza misalasala misafidy izay tianao ary andramo.
Ny anaran'ny mpampiasa voafidy «Buzz»Ny fanomezam-boninahitra an'i Debian, fizarana ankafizinay. Fa tsy misy. 😉
Makà fotoana hisafidianana ny rindrambaiko hapetraka. Ny mpitantana fonosana mahafinaritra dia mendrika ny fitetezana, araka ny aseho ao amin'ny sary 13, 14, 15 ary 16.
Sary 24, 25 ary 26: Aorian'ny fametrahana ny rafitra fandidiana avy amin'ny DVD na haino aman-jery hafa, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny manova ny anaran'ny solosaina sy ny sehatra arak'izay ilaina. Ny anaran'ny sehatra dia tsy dia ilaina loatra satria apetraka amin'ny alàlan'ny mpizara DHCP LAN. Ataontsika mazava izany mba hisorohana ny lesoka.
Sary 27, 28, 29, 30, 31 ary 33: Fanambarana ireo repositories hanavao ny rafitray, na eo an-toerana izany na amin'ny Internet. Toy ny nataontsika tao amin'ilay lahatsoratra Teo aloha Izahay dia tsy mandeha amin'ny laoniny ny trano fitahirizana samihafa atolotray ny OpenSUSE amin'ny mpizara azy amin'ny Internet, ary ampianay ny eo an-toerana. Izahay dia manohy mitahiry tahiry mitovy: Database, Packman, Updates, Oss y Tsy Os, Hanao latabatra iray miaraka amin'ny lalàna rehetra izahay. Mamela ny helok'izy ireo izahay raha tsy misy fonosana madinidinika tsy maintsy tadiavina sy hita amin'ny Internet. 😉
Sary 35, 36 ary 37: Manomboka ary mamarana ny fanavaozana ny Package Manager an'ny YaST. Amin'ny efijery voalohany dia avelantsika ireo fisafidianana default. Vao tsindrio ilay bokotra Ampiharo.
Sary 38, 39, 40, 41, 42 ary 43: Aorian'ny fanavaozan'ny Package Manager ny tenany, dia mandefa ny efijery miaraka amin'ireo fonosana avy amin'ny sisa amin'ny rafitra havaozina. Ao anatin'izany dia ekenay ihany koa ireo fisafidianana default.
Tsy misy sary: Tsy nisambotra ny efijery ny fizotran'ny famerenana amin'ny laoniny ny rafitra tokony hatao manaraka izahay, sy ny fizotry ny fidirana, raha jerena fa fantatry ny mpankafy KDE izany. Na izany aza, raha te-hahita ny sary fidirana ianao dia mifalia azafady Sary 21,
Fikirana voalohany hafa
Sary 44, 45 ary 46: Ambaranay ao amin'ny Firewall - Firewall fa ny interface interface eth0 anisan'ny Faritra anatiny na amin'ny LAN an'ny SME anay.
Sary 47 sy 48: Nandinika sy nametraka vokatra fanampiny izay atolotry ny OpenSUSE izahay. Tsy dingana tsy maintsy atao izany, fa soso-kevitra.
Sary 49 sy 50: Fitsidihana kely indrindra ny Preferansa fantatry ny rafitra momba ny tontolon'ny birao KDE.
Sary 51: Manampia na manaisotra ireo programa mampiasa ny maodelin'ny YaST.
Miandry anao amin'ny traikefa nahafinaritra manaraka izahay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Ny KDE haingana sy kanto amin'ny openSUSE 13.2 Harlequin - SMB Networks
Lahatsoratra tena tsara…. Arahabaina
carlidov dia hoy izy:
Nesoriko ny openuse tamin'ny solosaina birao, satria rehefa nandeha ny fotoana dia nifarana tamin'ny fizarazaran'ny rafitra ary tsy afaka nanadio azy aho, tamin'ny farany dia nametraka kde neon ary tsara satria tamin'ny kde neon dia 9G fotsiny no misy azy. Ao amin'ny solosaina findaiko manana manjaro kde aho, miasa tsara koa io ary azonao atao ny manadio ny rafitra toa ny kde neon.
Mamaly an'i carlidov
Mankasitraka lahatsoratra tsy momba an'i Debian, Arch na Ubuntu aho.
Inona koa, nanoratra lahatsoratra rindrambaiko maimaimpoana ho an'ny forum na bilaogy Uruguay aho, ary nantsoiko hoe "Ho an'ny Linux" foana izy ireo, fa tsy ho an'i Fedora, izay ny fizarana izay ampiasaiko foana alohan'ny hampiasako ny Mac. Mieritreritra aho fa manakatona ny zava-drehetra amin'ny sasany fizarana Mamoaka fahalalahana mety amin'ny lozisialy "maimaim-poana" izay ambaran'ny maro, satria ho an'ny olona tsy dia manana hevitra firy dia midika izany fa hiasa ao Ubuntu ohatra fotsiny ity rindrambaiko ity, ary raha tsy manana hevitra firy ilay manana OpenSUSE any amin'ny fiafarana maty ianao.
Alejandro TorMar: Misaotra betsaka tamin'ny fanehoan-kevitra sy ny fanombananao ny lahatsoratra. Manasa anao aho hanohy hiaraka aminay amin'ny andiany PYMES.
Carlidov: nametraka ny BleachBit aho tamin'ny dns.fromlinux.fan, ary koa amin'ny opensuse-desktop.fromlinux.fan, ary tamin'ny lafiny roa dia nanadio ny fizarazaran-toerana izay nametrahana ny rafitra miasa mihoatra ny 180 megabytes. Ny safidy nofidiko dia "BleachBit as Administrator". Ilay host dns.fromlinux.fan no nametrahako azy:
Gonzalo Martínez: Misaotra betsaka tamin'ny fanamarihanao tamim-pahatsorana. Ao amin'ny lahatsoratra:
Azavainay ny antony nisafidiananay ny distrikan'i Debian, CentOS, ary openSUSE ho an'ny andian-dahatsoratra SMB. Debian dia Universal, raha ny CentOS - Red Hat, ary ny openSUSE - SUSE dia distros miompana amin'ny raharaham-barotra raha ny hevitry ny bilaogera maro, sy ireo mpihazona azy ireo ary mpanohana matanjaka. Nanoratra lahatsoratra momba ireo distro roa farany izahay, tamin'ny fampisehoana, ary manasa anao aho hamaky azy ireo, raha mbola tsy nanao izany ianao. Ireo dia:
Rehefa manoratra momba an'i Debian isika dia manoratra momba ny rain'ny fianakaviana lehibe sy ny fonosana .deb. Rehefa ataontsika amin'ny CentOS - Red Hat, dia zavatra mitovy no mitranga, fa amin'ny fonosana .rpm.
Ny fisafidianana ireo disto dia tsy fety mihitsy. Niorina tamin'ny fahiratan-tsaina izany. Izaho manokana dia tsy afaka mandrakotra fizarana bebe kokoa hanoratana momba ny serivisy tambajotra ao amin'ny tambajotra SMB, satria mieritreritra aho fa lasa adala. 😉
Ho ahy manokana dia manasa anao aho hanoratra, ho an'ity bilaogy ity ihany DesdeLinux, momba ireo disro izay tsy resahanay, satria nasehonao fa nanao izany ianao tamin'ny tranga teo aloha. Manantena aho fa hanana izany fomba fihevitra izany i Luigys Toro, mpitantana anay.
Miarahaba anao Gonzalo!
Te-handray anjara aho, na dia 2 taona lasa izay aza dia nifindra tany Mac aho ary nampiasa OS X matetika, dia mbola ampiasaiko amin'ny asa (na ny asako sy ny VPS roa miaraka amin'ny tetik'asa manokana).
FromLinux dia varavarankely misokatra ho an'izay te-hanome ny fahalalany amin'ny fianaran'ny fiarahamonina. Ny traikefa niavian'ny mpanoratra dia izay mamela ny novice sy ny manam-pahaizana maro amin'ny sehatra samihafa hahavita asa bebe kokoa sy tsara kokoa mifandraika amin'ny Linux
Ahoana ny fametrahana ny Vesta Control Panel ao anatin'ny minitra
Omeo endrika vaovao ny Ubuntu Software Center misy lohahevitra Arc Dark